RASMI: PSG Oo Ugu Dambeyn Soo Bandhigay Lionel Messi – Garsoore Sports
RASMI: PSG Oo…
Kaddib markii uu uga tagay Barcelona dhibaatooyin dhaqaale aawadeed, Lionel Messi wuxuu guri cusub ka helay Paris isagoo qolka labiska la wadaagaya Neymar iyo Kylian Mbappe.
Lionel Messi ayaa ugu biiray kooxda Paris Saint-Germain heshiis labo sano ah kaddib markii uusoo gabagabeeyay 18-kii sano ee uu kusugnaa Barcelona.
Messi ayaa noqday ciyaaryahankii ugu weynaa ee abid soo mara Camp Nou, isagoo dhaliyay 672 gool 778 kulan oo uu saftay, laakiin waayihiisii wacnaa ayaa dhamaaday kaddib markii xaalad dhaqaale xumo ay soo wajahday kooxda Barca taasoo ku qasabtay inay awood u yeelan waayaan inay xiddigan heshiis cusub ka saxeexdaan.
Laacibka ku guuleystay lix jeer Ballon d’Or-ka ayaa wuxuu ahaa wakiil xor ah tan iyo 1-dii bishii Luulyo, in kasta oo la filayay inay tahay inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda reer Catalan.
Si kastaba ha ahaatee, ku dhawaaqistii khamiistii lasoo dhaafay ee ahayd inuusan dib ula saxiixan doonin Barca sababo la xiriira “caqabado dhaqaale” ayaa ku kalliftay PSG inay si dhaqso ah ugu dhaqaaqdo saxiixiisa.
PSG oo taniyo khamiistii la hadalhayay inay lasoo wareegeyso xiddigan ayaa qabsatay baraha bulshada 24kii saac ee ugu dambeeyay oo uu Messi-na u safrayay Paris halkaasoo ay kusoo dhoweeyeen taageerayaal farabadan kahor inta aanu ka ambabixin Barcelona oo ay taageerayaal xad dhaaf ah ku sagootiyeen.
PSG ayaa ugu dambeyntii saxiixiisa ku xaqiijisay fiidiyow quruxbadan oo Kusoo dhammaanaya xiddigooda cusub oo taagan bartamaha barxadda garoonka Parc des Princes.
Messi Waxa uu xiran doonaa lambarka 30-aad, halka PSG ay xaqiijisay in 2da sanno ee heshiiska Messi ay raacsantahay sannad kale oo ikhtiyaari ah.